राष्ट्रिय रंगशाला नै अस्थायी कोरोना अस्पताल - Media Dabali
आइतवार, मंसिर १४ २०७७Nov 29 2020
नेकपा सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डबीच यतिसम्म घोचपेच, माधव नेपालले दिए चेतावनी !
काठमाडौंको शंखमूलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते
विप्लवलाई नेकपामा मगाइयो, के हुँदैछ सरकारमा ?
प्रचण्ड–रेणुको यस्तो रहेछ भित्री कुरा, ओलीद्वारा बालुवाटारमा छताछुल्ल
'भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने’ प्रधानमन्त्रीलाई ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन पढ्न कांग्रेसले गर्यो आग्रह
प्रचण्डले ओलीलाई भने- 'कमजोरी महसुस गर्नुको सट्टा थप दम्भ भरियो'
ओली-प्रचण्डको प्रतिवेदनपछि नेता खनालकाे यस्तो घोषणा, दुवै अध्यक्षलाई तनाब
नेकपामा विवाद बढ्दा भूतप्रेत सल्बलाए : भट्टराई
३८ पेज लामो प्रस्ताव पेश गरेका ओलीलाई प्रचण्डको काउन्टर अट्याक, दिए यस्तो चुनौती !
राष्ट्रिय रंगशाला नै अस्थायी कोरोना अस्पताल
कोरोना भाइरस महामारीका कारण अस्पताल अपुग भएपछि पोल्याण्ड सरकारले खेल मैदानलाई पनि अस्पतालमा रुपान्तरण गरेको छ।
राजधानी वार्सामा रहेको राष्ट्रिय रंगशालालाई नै अस्थायी अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णय भएअनुसार निर्माण गरिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता पिओट्र मुलरले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार झण्डै पाँच सय बिरामीलाई कोठा पुग्नेगरी पुनर्निर्माण भइरहेको हो। ती कोठाहरुमा आवश्यकता परेका बिरामीलाई अक्सिजन सहितको थेपारीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।
'देशका कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको संख्या बढिरहेको हामीले देखेका छौँ, यो अत्यन्त छिटो छिटो वृद्धि भइरहेको छ, ती सबैलाई थेग्न हाम्रो अहिलेको अस्पतालले नसक्ने भएको छ, त्यसैले हामीले अस्थायी प्रयोगका लागि रंगशालामा अस्पताल बनाउन लागिएको हो,' प्रवक्ता मुलरले भने।
तर त्यो अस्पतालका लागि चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था भने सरकारले कसरी गर्न सक्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म पनि अस्पष्ट छ। पोल्याण्डमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुको कमी छ।
अस्थायी अस्पताल बनाउन लागिएको रंगशालामा ५८ हजार ५०० जना दर्शक बस्न मिल्ने क्षमता रहेको थियो। युरो २०१२ फुटबल च्याम्पियनसिप सञ्चालन गर्न यो रंगशाला निर्माण गरिएको थियो। त्यो प्रतियोगिताका लागि पोल्याण्ड र युक्रेनले व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका थिए।
गत वसन्तमा पश्चिमी अन्य युरोपेली देशहरुको तुलनामा पोल्याण्डमा कोरोना महामारीको असर कम देखिएको थियो। तर अहिले भने घातक रुपमा महामारी फैलिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार पोल्याण्डमा पछिल्लो केही दिनमा थप सात हजार ४८२ जना कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् भने ४१ जनाको मृत्यु भएको छ।
तीन करोड ८० लाख जनसङ्ख्या रहेको पोल्याण्डमा अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमित संख्या एक लाख ८३ हजार २४८ रहेको छ भने तीन हजार ६१४ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर वास्तविक संख्या भने त्योभन्दा धेरै हुन सक्ने बताइएको छ।
पछिल्लो दिनमा पोल्याण्डका ३६ हजार जनाको कारोना परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएकामध्ये झण्डै २१ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको पनि अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली शनिबार दिनभर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा, के भयो छलफल ?